सोचेको अनलाइनबाट सामान विक्रि वितरण गर्न पोखरामा शाखा. – Sabaikoaawaj.com
सोचेको अनलाइनबाट सामान विक्रि वितरण गर्न पोखरामा शाखा.
आइतवार, असार ४, २०७४ 8:56:24 PM	मा प्रकाशित
पोखरा, ४ असार /काठमाडौबाट अनलाइन मार्फत सामान विक्रि वितरण गर्दै आएकोको सोचेको डटकमले पोखराबाट पनि सेवा सुरु गरेको छ । पोखराको न्युरोडमा रहेको कस्मिक कम्प्युटिङ सोलुसन सगँ मिलेर पोखरामा शाखा विस्तार गरेको हो ।
आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर सोचेको डटकमका प्रबन्ध निर्देशक शैलेश लोहनीले पोखरा र आसपासको क्षेत्रमा सेवा दिने उद्देश्यले सेवा विस्तार गरेको बताए । उनले पछिल्ला समय अनलाइन मार्फत सेवा लिने नेपाली ग्राहकहरु माझ लोकप्रियता कमाउदै गएको बताए । उनले शाखाहरु भनेको मुख्य रुपमा पसल नभइ एक ग्राहाक सेबा केन्द्रको रहेको बताए ।
जसमा यसको केन्द्रिय कार्यालयबाट पठाएको समानहरुलाई ग्राहाकहरुलाई सजिलो सगं डेलिभरी गर्ने बताए । यहाँ केहि समान राखिएका पनि हुन्छन् तर ति समानहरु पनि त्यहाँबाट सोझै खरिद गर्न नपाइने बताउदै सामानहरु समेत अनलाइन नै खरिद गर्नु पर्ने बताए ।
अनलाइनबाट ल्यापटप, इलोक्टोनीक्स सामान, मोवाइल, लत्ता कपडा, हेल्थका सामाग्री लगाएतका सामान किन्न सकिने कस्मिक कम्प्युटिङ सोलुसनका सञ्चालक पुरुषोतम कुवँरले जानकारी दिए । खरिद गरेको सामानहरु डेलिभरी गरि दिने र धेरै जसो ठाँउमा सामान दिए पछि मात्रै पैसा लिने गरेको उनलेका भनाई थियो ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, असार ४, २०७४ 8:56:24 PM